Kurapa kwehuchi uye jelly yeumambo kunatsiridza hutano hwako - AFRIKHEPRI
The Mysteries of the Chinese Pyramids - Documentary (2016)
monday, Chikunguru 6, 2020
EPakati pemurume nenyuchi, pane nyaya inoshamisa yerudo inodzoka makore anopfuura gumi. Basa remukoko uye kucheka uchi, kazhinji hwakakomberedzwa nengano uye ngano, chikamu chakakosha munhoroondo yevanhu. Nhasi, kana munhu wese achida kuona kunakisa kwekunaka kwehuchi hwakawanda, vanhu vazhinji vari kuwanazve hukasha hwavo.
Kuzivikanwa sedzimwe dzeVamwari uye sechiratidzo chekunakirwa, rudo, mufaro, kunyangwe kureba, hunhu hwevanyowani hwakamira muyedzo wenguva. A prehistoric chikafu par kunaka, uchi, uchibva mumanyuchi, wakaonekwa Pasi makore anopfuura makumi mana nemashanu emamiriyoni apfuura. Kubva pamavambo e "kukohwa" kunyangwe nengozi yekusvikira mumukoko, varume vekutanga vaiziva nenzira yenjere mabhenefiti angaunzwa neuchi anokosha. Nekuda kweufakazi hwatiri nahwo izvozvi, zvinoita sezviri pachena kuti basa remukoko uye goho rakarongedza huchi zvakatanga pamahombekombe eNile panguva yeParadzao. Saka huchi hwakakurumidza kushandiswa kupumha miromo yevachangozvarwa, kuchengeta vapenyu uye kusungisa vakafa. Isu takawana chaizvo makumi mana nemashanu emamiriyoni emakore ekugara papuranga akatarisana nenyaya yekurapa, zvichimutsa pachena gadziriro dzekurapa dzinowanikwa neuchi. Saka muIjipita yekare, inokosheswa nehukasha hwayo hwekurapa uye hwehupfumi, huchi hunobvumira nyuchi kubatanidza mavara echiEgypt, ichiva hieroglyph inomiririra pharaoh.
Nyuchi inoonekwa seyamwari. Uchi hwaive "chikafu cheVamwari" uye misodzi mhenyu yaRa (Mwari-Zuva). Nyuchi yaive chiratidzo chemaparaoh mumutauro we hieroglyphic. Pasi peRamses II, vashandi veHurumende vakagamuchira chikamu chemari yavo nenzira yeuchi. Iyo nzira yakakosha yekubhadhara. Pamusoro pegaba reuchi takagamuchira dhongi kana nzombe.
Vanochera matongo vakawana makuva evaIjipita airatidza hupenyu hwezuva nezuva hwevaIjipita kwavakaonekwa vachidya zvigadzirwa zvakasiyana siyana zveuchi. Ivo vaishandiswawo mushure memuchato, panguva ye "honeymoon" kubva zvino izwi iri. Semuenzaniso, iyo Smith papyrus yakawanikwa muThebes muna 1860 ibhuku rekuvhiya rekununura kwezvirwere zvakasiyana siyana. Kutenda kune papyri yakawanikwa, vanochera matongo vakaona kuti huchi hunoshandiswa zvakanyanya kumishonga uko iripo kubva pa20 kusvika pa84%. Yakashandiswa seantiseptic, antifungal uye anti-immune. Isu tinoziva zvakare kuti vanamai vevaEgypt venguva yaFarao vaive vakazadzwa nemusanganiswa wakagadzirwa naphtha (peturu mumamiriro ayo echisikigo) nepropolis.
Yaive muMesopotamia, kubva pamireniyumu yechitatu, apo nyuchi dzekutanga dzakaonekwa. MuGreek, huchi hwakapihwa sechipiriso kuvaVamwari, nekudaro izwi rekuti "nyowani weVamwari". Izvo zvaizivikanwa zvakare nekushandiswa kwehunhu hwayo sekuratidzwa nezvakanyorwa naHippocrates (460-370 BC), baba vekurapa muCreek Greece.
Uchi hune chiitiko chinobatsira kwazvo pane vanhu vanofarira kugaya zvekudya sezvo ichinyanya kugaya nekuti iine zvishoma sucrose. Kugaya kwaro kwakakurumidza uye kuri nyore, hutumbi hwakaoma matai. Uchi zvakare inobatsira kugadzirisa mineral salt senge calcium, magnesium, phosphorus. Kukura kwehombodo nemeno zvakanyatso kusimbiswa. Kuvapo kwema enzymes muuchi zvakare kunobatsira kusimudzirwa kwezvimwe zvekudya, izvi zvinochengetedza matumbu emukati uye kudzivirira kufuratirwa kwechipfuva kunyanya kune vanhu vane kupukunyuka.
Mukuwedzera, kudya kwehuchi mucheche nevana vaduku, kunyanya vana vanotambura nokuonda uye kunetseka, kuchabatsira kuvandudza izvi uye kupa zvibereko zvakanaka.
Muvakweguru, pasina kurwara, ivo dzimwe nguva vaneta, isu tinobva tataura nezvechirwere che asthenia. Muchiitiko ichi, kudya kwehuchi kwemazuva ese, panguva inoperekedzwa nemurapa wejelly jelly, kuchadzosera chimiro chavo, toni yavo uye kudya.
Apitherapists vanobvumirana kuti kazhinji matambudziko ezvehutano, kurasikirwa kwekudya, anorexia yehutano hwepakutanga, ichagadziriswa nekunwa uchi.
Nokuda kwehutachiona, huchi hunoratidzwa kuti uwane diuresis.
Iyo chiropa inogara ichirwiswa muhupenyu hwezuva nezuva nehupfu, muchetura, kusvibiswa, kuwandisa. Uchi inomutsa iyo enzyme system mune chiropa microsomes. Iro zvakare betsero inoshanda mukurwisa zvinokuvadza zvinokonzerwa nedoro pachiropa.
Kana iri dumbu, tinoziva kuti makumi mapfumbamwe muzana emaronda aive nekuda kwebhakitiriya inonzi Heliobacter pylori, ine kurapwa kwemishonga inorwisa mabhakitiriya haina basa (nekuda kwekuti dumbu inzvimbo ine acidic nharaunda). Nekudaro uchi hunotenda kune yayo antibacterial uye disinfectant simba inodzora uye mavanga akatsamwiswa madziro uku uchidzivirira hutachiona.
Kunyanya kushandiswa kwehuchi kunozivikanwa chaizvo kudzikamisa huketa kana kuzora maronda. Kutorwa neti yemakwenzi kana mukaka unodziya, uchi hune kupfava, kutarisira, kupokana uye kurwisa mabhakitiriya. Nezvekutsvaira kwezwi, hoarseness, garwe remvura ine uchi nejusi remuti rinopa zvinoyemurika.
Mune ophthalmology, uchi hwave huchishandiswa kubvira apo vanhu vekare vaiishandisa yakajeka huchi kuitira kuchengetwa kwemeso anopisa. Mazuva ano, zvidzidzo zvakaita kuti zvive nekukwanisa kudonhedza madonhwe emaziso apo uchi, humambo jelly, mapuroteni ave, mukugadzirira kwakabatana, mhedzisiro yakanakisa pakuputika kweziso.
Kurapa, kushandura uye mishonga inouraya yakatarwa uchi kuti inonyanya kushandiswa mune dermatology uye zvipfeko; ari oga kana akabatanidzwa nepropolis kuti adzorezve ganda, kurapa maronda maduku uye kupisa kwezuva.
Le miel zviri chaizvo chibereko chinobva pamaruva nemitiiye pa also the mishonga yemishonga kubva kune izvo zvarinobva kwazviri. Heano matunhu umo idzi hono dzinogona kupa imwezve rubatsiro kune marapiro akarairwa nachiremba wako:
Acacia : kunyorova, mucheche muchengeti,
Chestnut : kubuda kweropa, kuneta,
Eucalyptus : airways,
elavender : misoro, uye zvinopisa, maronda uye zviduku zviduku,
Oranger : hope,
Rosemary : chiropa, kukurudzira, kupesana-kuneta,
nemisipiresi : kupemha tract,
madota : kugadzirisa (kunakidza nekamukira),
sunflower : kubuda kweropa.
Zvakanaka zveumambo jelly
Royal Jelly ndiyo natural substance the most akapfuma mu vitamini B5 (pantothenic acid), iyo inobata a basa guru uye inokosha mune metabolism yemasero. Munhu ane zvakakwana kudiwa kwevhitamini B5, kushomeka kwayo kunogona kukonzera zvimwe zviratidzo zvekukwegura: zvinetso zveganda, kurasikirwa nebvudzi, kupera simba uye kungwara, kusagadzikana kweusiku, kusagadzikana kwekudya, nezvimwewo. Nekupa miviri yedu nemadheti evhitamini B5 ayo anogona kunge achishomeka, iyo royal jelly anogona kubatsira kunonoka kuderedza zvinokonzerwa nokukwegura. Nyanzvi idzi dzakabatana mukuziva royal jelly mhedzisiro yayo pane chisikwa:
Zvidzidzo zvakaratidza kuti inovandudza hutano, simba uye metabolism.
Kurapa kwejushe rwehosi kunovandudza mamiriro epfungwa uye kunosimudzira huwandu hwese. Iyo ine zvakare chiito pane tishu oxygenation uye inoita pane chiitiko chemamwe enzymes, kunyanya muchiropa.
Inowedzera kuramba kutonhora uye inomutsa chishuwo.
Inobatsira kusimbisa miviri yedu kunyanya munguva yehutachiona.
Iinewo eerythropoietic zvinhu zvinokurudzira kugadzirwa kwemasero matsvuku eropa nemapfupa emapfupa.
Icho chine zvekare, chinobatsira kugadzirisa.
Iyo analgesic: inoderedza maonero ekurwadziwa uye inogona kushandiswa kubatsira mukurapa kweanoputika maronda.
Iyo ine inoshanda inorwisa mabhakitiriya kurwisa mavairasi senge herpes nefuru uye pane pathogenic genes yakadai saProteus naEscherichia coli.
Iyo inovandudza kugoverana kwemagetsi uye kupararira kweropa, saka zvinonakidza kune vatambi.
Inowedzera kuchengetedza kwedu kwepanyama uye kuenzana kwemuviri wedu nekupa mavitamini, zvinokosha amino acid uye kutsvaga zvinhu.
Kuporesa kweumambo jelly saka kwakakosha, kuyera uye zvakare euphoric, kupa: kudya, kurara, kuyera, kuyeuka uye kugadzirisa mamiriro akajaira. Nehurombo, kugadzirwa kwe royal jelly zvinoda nhamburiko huru, mukoko wega wega unogadzira hushoma hushoma.
Ndokusaka inogara ichidhura.
Energie Vital- Propolia - Nyuchi- Propolis- Royal Jelly- Acerola- Papaya- Ginseng- 120g - Yakagadzirwa muFrance
9 nyowani kubva ku € 11,19
Tenga 11,19 €
kubvira waChikunguru 6, 2020 6:25 am
Yakanakira kuchinja mwaka
Kukurudzira / Kukwirisa *
* Vakapfuma muVitamin C
Akanakisa Mutengesi kubva 1979
120g jar - Mazuva gumi
Maka Dean, Black American muvambi we IBM PC